पुष्पलालप्रति गद्धारी गरियो र भनियो पुष्पलाल गद्धार !
पुष्पलाललाई तेत्रो वर्ष गाली गरेकोमा आत्मग्लानि भयो !
२०३२ सालताका तत्कालीन चौथो महाधिवेशनका कार्यकर्ता साथीहरुको संगतले म कम्युनिष्ट विचार र दर्शनबाट प्रभावित भएको थिंए । यसै बेलादेखि म कम्युनिष्ट राजनीतिमा आकर्षित भएको हुँ । उबेला म धेरै लामो समय त चौथो महाधिवेशनको समर्थक भएर बसिनँ । तर, पहिलो प्रभाव त्यसैबाट परेको हुँदा त्यसका धेरै कुराहरु पछिसम्म मेरो राजनीतिक यात्रामा विराशतका रुपमा कायम रहे । उ बेला मलाई कमरेड पुष्पलाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव भन्ने थाहा नै थिएन । संस्थापक र सम्मान गर्ने नामका रुपमा होइन गद्धारका रुपमा पुष्पलाललाई पहिलो चोटी मैले चिनेको हो, थाहा पाएको हो । उ कांग्रेसको पुच्छर हो, कांग्रेस चाही देशघाती पार्टी हो भन्नेमा मलाई पूर्ण विश्वस्त बनाइएको थियो ।
पूर्वबाट आँधी हुरी जस्तै फैलदै गएको झापा आन्दोलनको राप, भारतमा भइरहेको नक्सलवादी आन्दोलनको प्रभाव हामी धेरै त्यसबेलाका आलाकाँचा केटाहरुमा नपर्ने सम्भावना नै थिएन । क्रमशः हामी केही केटाहरु त्यता तानिन थाल्यौं । नख्खु जेल ब्रेकको कथा हामीलाई रोमाञ्चक लाग्न थाल्यो । त्यसका नायक सी. पी. मैनाली दन्त्यकथाको कुनै चमत्कारी बहादुर राजकुमार जस्ता हाम्रा आदर्श पात्र बन्दै गए । उनका बारेमा धेरै थरी कथाहरु (कति यथार्थ, कति काल्पनिक) बन्न थाले । त्यस्ता कथाहरुले हामीलाई अझ उत्साहित बनाउदै लगे । क्रमशः हामी नक्सलवादी आन्दोलन, चारु मजुमदार, झापा आन्दोलन, सीपी मैनालीका जोडदार समर्थक हुँदै गयौं । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट कोअर्डिनेसन केन्द्र (माले) अर्थात कोके बनेपछि हामी त्यसको सम्पर्कमा नै नभए पनि त्यसका समर्थक बन्यौं । २०३५ सालमा नेकपा (माले) बनेपछि भने विधिवत रुपमा सम्पर्कमा रहेर पार्टीमा संगठित हुँदै राजनीतिमा सक्रिय हुन थालियो । उबेला हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओविचारधारा, चारुमजुमदार लाइन थियो । वर्ग शत्रु खतम हाम्रो कार्यनीति थियो । एक एरिया, एक युनिट, एक स्क्वायड एक एक्सन भन्ने कार्ययोजना थियो । यसरी देशभित्रै बसेर वर्गशत्रुको सफाया गरी नयाँ जनवाद स्थापना गर्ने सपना देखेका युवाहरुका बीचमा पुष्पलाल भगौडा, धोखेबाज र गद्धार थिए । उनी कांग्रेसका पुच्छर थिए । भारतमा बस्छन्, क्रान्तिका गफ गर्छन्, उनी दक्षिणपंथी संशोधनवादीका नाइके हुन् भन्ने हामीलाई भित्रैदेखि लागेको थियो । तेसो त हामी माले बाहेक कसैलाई पनि क्रान्तिकारी मान्दै मान्दैनथ्यौं । सबैलाई दक्षिणपंथी संशोधनवादी नै देख्थ्यौं । हाम्रोबीचमा एउटा लोकपृय गीत नै थियो –
'विपि एउटा भारतको घोडा हो,
लेण्डुपेको असली जोडा हो
नेपाली कांग्रेसको नम्बर एक दलाल' ।
त्यसबेला हामीलाई पुष्पलाल पढ्नु पर्छ भन्ने लाग्दै लागेन । हुन त हामीले पुष्पलाल पढेको भए हामी पनि गद्धारको समर्थक गनिन सक्ने र पार्टी कारबाही हुने जमाना थियो त्यो । विस्तारै नेकपा (माले) भित्र विवादहरु जन्मिन थाले । वर्गशत्रु खतम लाइनका बारेमा प्रश्न उठ्न थाले । भारतमा चारुको निधनपछि पार्टीमा चर्को विभाजन भयो । नक्सलवादी आन्दोलन आफ्नो अन्तिम रक्षा समेत गर्न नसक्ने गरी धराशायी हुँदै गयो । यो सन्दर्भमा हामी अलि बढी अध्ययन गर्नु पर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौं । तर, त्यो बेला चाहेर पनि हामीले धेरै सामग्रीहरु पुष्पलाल बारे पाउन सकेनौं । उनका राजनीतिक लेख रचना प्राप्त गर्न सकेनौं । उबेला बनारसबाट निस्केका २, ३ अंक नेपालपत्रमा पुष्पलालका केही रचनाहरु पढ्ने अवशर मात्र पाइयो । उनको संयुक्त जनआन्दोलनबारेका रचनाहरु हामीले पढ्नै पाएनौं । तर, त्यसबेला नेपालपत्रमा निस्केको पुष्पलालको नेपालको मातृसत्ताको विश्लेषण गरिएको २ अंकमा प्रकाशित इतिहास सम्बन्धि लेखले भने मलाई अति धेर प्रभावित बनायो । यसपछि मात्र पुष्पलालप्रति मेरो धारणामा परिवर्तन आउन थाल्यो । म उनीप्रति सकारात्मक हुँदै गए । यी २ लेखले म उनका अन्य लेख रचनाहरु पढ्नै पर्छ भन्ने निचोडमा पुगें । पुष्पलालको मृत्युपछि ०३६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन उनकै बिचारका आधारमा भयो र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि भने मलाई पुष्पलाललाई तेत्रो वर्ष गाली गरेकोमा आत्मग्लानी जस्तो लाग्न थाल्यो । उनीप्रति श्रद्धा जाग्न थाल्यो । विस्तारै उनका अरु रचनाहरु पढन थालियो । त्यसपछि पुष्पलालका बिचारहरु सही रहेछन् भन्ने निश्कर्षमा पुगियो ।
उनका धेरै रचनाहरु भने पुष्पलाल प्रतिष्ठान बनेर त्यसले प्रकाशित गरेपछि मात्रै पढ्न पाइयो । यी सबै रचना पढेपछि र एमाले बनेपछि भने पुष्पलाल हाम्रा पुरै आदरका पात्र बने । आज आएर विगतलाई फर्केर हेर्दा उनलाई गरिएका गालि आफैलाई आश्चर्य लाग्छ । अन्तमा पुष्पलाल सही विचार र दृष्टिकोण भएका एकजना दुरदर्शी नेता हुन् भन्नेमा आज कसैलाई द्विविधा छैन । तर, व्यवहारिक राजनीतिमा, राजनीतिका घिनलाग्दा दाउपेचमा पुष्पलालप्रति गद्धारी गरियो र भनियो पुष्पलाल गद्धार ! समकालीन राजनीतिका शिखर पुरुष पुष्पलालप्रति इतिहासमा न्याय नगरिएका थुप्रै प्रसंग र घटनाहरु छन् । त्यसको समिक्षा गरेर पुष्पलाललाई साँचो अर्थमा बुझेर मात्र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि जान सक्छ । यो नै पुष्पलालप्रतिको साँचो श्रद्धाञ्जली पनि हुनेछ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एकजना पूर्ब नेता राईको यो महत्वपूर्णअनुभूति हामीले राईको ७ साउन २०७२ ब्लगबाट लिएका हौं Top of Form